Amagama amathathu amatsha e-BAFTA kumabonwakude e-Apple TV + | Ndisuka mac
Ekuqaleni kuka-Matshi, iBritish Film Academy yakhupha uluhlu lwe Iifilimu ezityunjelwe ushicilelo lwalo nyaka, Uluhlu apho kwafunyanwa ifilimu iGreyhound edlala uTom Hanks kunye nefilimu yoopopayi iWolfwalker, iifilimu babengenathamsanqa kuhlelo lokugqibela lwee-Oscars ibibanjwe ngeCawe ephelileyo.
U-Apple ubhengeze ukuba ezintathu kuthotho lwazo ziya kulungiselela amabhaso kamabonakude we-BAFTA. Sithetha ngothotho Amancinci eMelika, IMicroWorlds y Iplanethi yasebusuku ngombala opheleleyo.
Ukutyunjwa kwamabhaso kamabonakude e-BAFTA kungqinelana nezi ndidi:
Melika encinci. Utyunjwe kwinqanaba le-Best International Series.
IMicroWorlds. Utyunjwe kudidi lweSandi esigqwesileyo.
Iplanethi yasebusuku ngombala opheleleyo. Utyunjwe kwiCandelo eliPhambili lokuFota.
Aba batyunjiweyo baphawula ukuqala kuka-Apple kwii-BAFTA TV Awards kwaye ukongeza kwimibhiyozo ye-Apple TV + uthotho kunye neefilimu, kubandakanya nokutyunjwa kwamaBhaso okuQeqesha amaBhaso, amaBhaso amaGcisa amaBhaso, iiMbasa zabaGxeki, iGlobal Globes, ixesha lasemini kunye nePrimetime Emmy Amabhaso, amabhaso emifanekiso ye-NAACP kunye neMbasa yePeabody, phakathi kwabanye, ukufumana Ukuphumelela kwe-106 kunye nama-367 abatyunjiweyo kwisithuba esingaphantsi konyaka onesiqingatha.
Amabhaso amaShishini oMbane we-BAFTA abanjwa nge-11 ka-Epreli, kodwa ngelishwa kwiminqweno ka-Apple, bobabini iGreyhound kunye neWolfwalkers Bashiyeke ngaphandle kwabaphumeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Amagama amathathu amatsha e-BAFTA Umabonwakude kwi-Apple TV +